mobile edit မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုလ်ဘိုင်းဆိုဒ်မှ ပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှု (ဝက်ဘ် သို့ app) ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၃၁၉၅ ခု
OAuth CID: 1841 PAWS [2.1] PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၁၉၁၉ ခု
mobile web edit မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ် မိုလ်ဘိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှု ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၇၉၃၂ ခု
visualeditor မျက်မြင် တည်းဖြတ် Edit made using the visual editor ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၇၉၉၄ ခု
mobile app edit မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ် မိုလ်ဘိုင်း app မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၅၆၅၇ ခု
advanced mobile edit အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ် အဆင့်မြင့်ပုံစံနှင့် အသုံးပြုသူမှ တည်းဖြတ်ထားသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၁၂၀၆ ခု
android app edit အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ် Edits made from mobile app for Android ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၉၄၁၉ ခု
discussiontools-added-comment (ဝှက်ထားသော) A talk page comment was added in this edit ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၈၉၉၅ ခု
mw-new-redirect ပြန်ညွှန်းအသစ် Edits that createanew redirect or changeapage toaredirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၀၅၅ ခု
visualeditor-wikitext ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ် Edit made using the 2017 wikitext editor ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၆၉၉၅ ခု
mw-reverted နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး Edits that were later reverted byadifferent edit ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၆၀၄၉ ခု
wikieditor (ဝှက်ထားသော) Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor) ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၄၇၁၁ ခု
mw-undo နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that undo previous edits using the undo link ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃၂၈၅ ခု
contenttranslation ContentTranslation အကြောင်းအရာ ဘာသာပြန်ခြင်း ကိရိယာကိုသုံး၍ အခြားဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၈၆၄ ခု
mw-rollback နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that roll back previous edits using the rollback link ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၃၉၁ ခု
visualeditor-switched Visual edit: Switched User started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၂၁၆ ခု
contenttranslation-v2 ContentTranslation2 အကြောင်းအရာ ဘာသာပြန်ခြင်း ကိရိယာဗားရှင်း ၂ ကိုသုံး၍ အခြားဘာသာစကားမှ ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၇၈၅ ခု
ios app edit iOS app edit အိုင်အိုအက်စ်အတွက် မိုဘိုင်း app မှ တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၆၄၄ ခု
mw-changed-redirect-target ပြန်ညွှန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် Edits that change the target ofaredirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၅၂၄ ခု
mw-manual-revert လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that manually restore the page to an exact previous state ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၁၂၆ ခု
discussiontools (ဝှက်ထားသော) DiscussionTools အသုံးပြု၍ တည်းဖြတ်ခြင်း ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၇၃ ခု
mw-replace အစားထိုးခဲ့သည် Edits that remove more than 90% of the content ofapage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၇၁၉ ခု
discussiontools-source ရင်းမြစ် DiscussionTools သည် ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နေသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၅၇ ခု
mw-blank ဗလာပြုလုပ်ခြင်း စာမျက်နှာတခုအား ဗလာပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၅၁ ခု
discussiontools-reply အကြောင်းပြန်ရန် အသုံးပြုသူသည် DiscussionTools ဖြင့် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို ပြန်ကြားခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၄၉ ခု
mw-removed-redirect ပြန်ညွှန်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည် Edits that change an existing redirect toanon-redirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၅၂၃ ခု
discussiontools-source-enhanced (ဝှက်ထားသော) DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbar ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၄၁၄ ခု
massmessage-delivery MassMessage delivery Message delivery using Extension:MassMessage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃၁၉ ခု
OAuth CID: 1805 SWViewer [1.4] App to monitor the recent changes ofawiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၉၃ ခု
discussiontools-newtopic အကြောင်းအရာအသစ် အသုံးပြုသူသည် DiscussionTools ဖြင့် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခုကို စာမျက်နှာသို့ ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၂၄ ခု
discussiontools-visual မျက်မြင် DiscussionTools သည် မျက်မြင်တည်းဖြတ် ဖြစ်နေသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၂၁၆ ခု
disambiguator-link-added သံတူကြောင်းကွဲ လင့်ခ်များ သံတူကြောင်းကွဲစာမျက်နှာများသို့ ပေါင်းထည့်ထားသောလင့်ခ်များအား တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၆၆ ခု
emoji အီမိုဂျီ Used by global abuse filter 110. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၃၉ ခု
newcomer task လူသစ် လုပ်ငန်းဆောင်တာ Edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၉၂ ခု
help panel question အကူအညီစားပွဲ မေးခွန်း Edit made from the help panel's postaquestion feature ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁၈ ခု
newcomer task copyedit Newcomer task: copyedit "Copyedit" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၆ ခု
autobiography autobiography ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု
newcomer task references Newcomer task: references "References" task edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၃ ခု
coi-spam coi-spam ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော မှန် ပြောင်းလဲချက် ၁ ခု